Nyocha akwụkwọ: 'Wemụ nwanyị Weird' bụ ihe dịịrị mkpa maka ndị na-akwado egwu egwu
Mbido Akwụkwọ Horrorakụkọ ifo Nyocha akwụkwọ: 'Wemụ nwanyị Weird' bụ ihe dịịrị mkpa maka ndị na-akwado egwu egwu
by Waylon Jọdan August 3, 2020
by Waylon Jọdan August 3, 2020 1,418 echiche
Womenmụ nwanyị Weird: Akwụkwọ Akụkọ Ochie nke Akụkọ site na bymụ nwanyị Na-ede Akwụkwọ: 1852-1923, ohuru ohuru ohuru nke akụkọ banyere ike karịrị ike mmadụ, pụta na August 4, 2020 site na ndị editọ Lisa Morton na Leslie S. Klinger. Ọ bụ ihe zuru oke maka ndị nwere mmasị na ụmụ nwanyị ndị nyere aka ịkọwa ụdị egwu ahụ.
Nchịkọta ahụ nwere ihe karịrị akụkọ 20 nke ihe ndị dị ịtụnanya na ndị na-adịghị ahụkebe, ụfọdụ sitere na ndị edemede ị na-enyoghi aha ha nụrụ, na ndị ọzọ niile dabara adaba na-echekwa maka itinye ha na akụkọ ọdịnala na nchịkọta site n'oge ruo n'oge.
Ọ dị nwute, ọtụtụ oge a na-achịkọta akụkọ ndị dị ka ndị a, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ bụ ụmụ nwoke na-ede akwụkwọ akụkọ tinyere ụmụ nwanyị ndị na-ede ihe n'otu oge ma ọ bụ abụọ. Obi dị m ụtọ, Klinger na Morton kpebiri na ọ bụ oge ịhapụ ụmụ nwanyị a nwere ọgụgụ isi ka ha kwuo okwu.
Womenmụ Nwanyị di egwu amalite na nke Elizabet Gaskell Akụkọ Nọọsụ Ochie. E bipụtara ya na 1852, otu nwanyị na-elekọta nwanyị mere agadi na-akọ akụkọ banyere otu ìgwè ụmụaka akụkọ na-emetụ n'ahụ metụtara nne nne ha mgbe ọ bụ nwa ọhụrụ. Ọ bụ akụkọ zuru oke iji tọọ ụda maka ihe ị ga-ahụ na mkpokọta ndị fọdụrụnụ. Ọ bụkwa ezigbo ihe atụ nke ihe kpatara arụ ji chụpụ ọtụtụ ụmụ nwanyị na-ede akwụkwọ n'oge ahụ.
Ọ dabara na mgbe niile mgbe Onyenwe anyị David Cecil – onye ọkọ akụkọ ihe mere eme na ọkà mmụta-dere banyere ya "nwanyị niile" na ọ "gbalịsiri ike iji merie adịghị ike ya ma ọ bụ n'efu." N'ụzọ dị mwute, ụdị okwu a na-acha nkatọ banyere ọrụ ya ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ iri abụọ ruo mgbe ndị edemede na 50s na 60s malitere ịgụgharị Gaskell wee ruo na nkwubi okwu na echiche ya bụ onye bu ụzọ bute ụzọ nwanyị nke kọwara ihe kpatara ọtụtụ ji dị egwu. ndị ikom na-akatọ mmalite narị afọ nke 20 ahọrọla ịhapụ ọrụ ya.
Mgbe ahụ enwere ndị edemede dị ka Louisa May Alcott onye ị maara aha ha nke ọma, mana ị nwere ike ọ maghị na ha na-agbanye mkpịsị ụkwụ ha na ọdọ mmiri / egwu egwu site n'oge ruo n'oge. Ụmụ nwanyị bụ ịrụ ụka adịghị ya kasị mara amara ọrụ, ma Echefuola na Pyramid; ma ọ bụ, Nkọcha nke Mama ahụ site na 1869 tinye Alcott na akwukwo edemede dika otu n’ime ndi nwanyi izizi dere akuko “Mama ji”.
Enwere m mmasị na Charlotte Perkins Gilman's Nnukwu Wistaria. Ihe dị ka onye ọ bụla weere akara ugo mmụta mbụ na kọleji maara ihe onye edemede ahụ maara Akwụkwọ na-acha edo edo, ma ọ pụrụ ịbụ mmadụ ole na ole agụwo akụkọ a, otu akụkọ banyere mmụọ nke metụtara ụfọdụ isiokwu ndị ahụ dị ka ọrụ a maara nke ọma.
Ihe m kacha hụ n’anya gbasara nchịkọta a –ị na nchịkọta ndị ọzọ dị ka ya bụ - mgbe m webatara ọrụ na ndị edemede m na-agụbeghị.
Were dị ka ihe atụ Ndi Were-Wolf onye Clemence Housman dere. Housman bụ onye edemede na onye eserese. Ọ na-abụkwa nwanne nwanyị nke onye na-ede uri AE Housman. Akụkọ a na-ekpuchi ọtụtụ echiche nke ndị na-ezighi ezi banyere nsogbu ụmụ nwoke na-enwe n'oge ahụ, na-etinye ha na akụkọ ọjọọ, mana akụkọ a na-apụghị ịgbagha agbagha banyere anụ ọhịa wolf.
Womenmụ Nwanyị di egwu n'ikpeazụ na-arụ ọrụ n'ihi akụkọ na ndị edemede Klinger na Morton họọrọ. Ha na-ewetara ngalaba nke ụmụ nwanyị bipụtara n'oge ahụ, na-elekwasị anya na akụkọ ndị na-abụghị naanị nke edere nke ọma mana ha dịkwa ezigbo egwu. Ha na enye kwa nkpuru edemede nkpuru obula banyere onye edemede obula ka inwee ike imuta ihe banyere umu nwanyi di egwu na nchikota a.
Akwụkwọ dị ịtụ na Amazon site Pịa ebe a. Enweghị m ike ịkwado ya ma ọ bụrụ na ị bụ onye na-akwado akụkọ ifo nke ihe dị ịtụnanya na nke na-adịghị ahụkebe.